အလုပ်မှာ အပျော်တွေများလာတဲ့အချိန် ဖြစ်တတ်တဲ့ ဆိုးကျိုး (၅) ချက် - For her Myanmar
အလုပ်မှာ အပျော်တွေများလာတဲ့အချိန် ဖြစ်တတ်တဲ့ ဆိုးကျိုး (၅) ချက်
အပျော်တွေများလာတဲ့အခါ အပျက်ဘက်ရောက်သွားတတ်တာ သဘာဝပါ
ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်အခြေအနေ အကောင်းအဆိုးပေါ် မူတည်ပြီး ကိုယ့်အလုပ်ခွင်ကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ထိခိုက်တာမျိုးဖြစ်စေတတ်ပါတယ်တဲ့။ အရင်တုန်းကတော့ ကုမ္ပဏီတွေမှာ ကိုယ့်အလုပ်ပြီးရင်ပြီးရော ဝန်ထမ်းက သေသေကြေကြေ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ အထက်လူကြီးတွေ များခဲ့ပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုယ့်ကုမ္ပဏီပိုပြီး တိုးတက်ဖို့အတွက် ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှုကို ဦးစားပေးပြီး စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တန်ဆေးလွန်ဘေး ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း အပျော်တွေပဲ စွတ်များလာတဲ့အခါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလေးတွေ ရှိလာတတ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ လူဆိုတဲ့အမျိုးကိုက သာရာနောက်လိုက်တတ်တဲ့ သဘောမို့ အပျော်တွေပဲ ဆက်တိုက်ဆိုသလို လုပ်နေတဲ့အခါ လုံးဝအလုပ်လုပ်ချင်စိတ် မရှိတော့တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ (အချိုစားနေကျ လူတစ်ယောက်ကို အခါးရုတ်တရက် ကျွေးတဲ့အခါ ခါးခါးတူးတူးငြင်းသလိုမျိုးပေါ့။) ပျင်းသွားတာပေါ့လေ အလွယ်ပြောရရင်…
(၂) အလုပ်ကို နေ့ရွှေ့ညရွှေ့ လုပ်လာတယ်။
ဒါကတော့ ပထမတစ်ချက်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲပေါ့။ အလုပ်လုပ်ရမှာ ပျင်းလာတော့ ဒီနေ့ မလုပ်လည်း ရပါတယ်ကွာ။ မနက်ဖြန်မှ လုပ်မယ်။ အဲဒီ မနက်ဖြန်ဆိုတဲ့ နေ့ရောက်လာတော့လည်း နောက်နေ့မှ လုပ်မယ်ဆိုပြီး မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ မနက်ဖြန်ပေါင်းများစွားကို ရွှေ့ရင်းရွှေ့ရင်းနဲ့ လကုန်တဲ့အထိ ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ဖြစ်တော့တဲ့ အကွက်ဆန်းတွေ ဖြစ်လာတာပေါ့။
(၃) အလုပ်အပေါ်မှာ လေးစားမှုမရှိတော့ဘူး။
ဒီလောက် ပျော်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကို ပြောင်းပါဆိုရင်တော့ ကုတ်နဲ့ ကော်ထုတ်တောင် ပြောင်းချင်မှာ မဟုတ်ပေမဲ့ တကယ်တမ်း အလုပ်အပေါ်မှာ လေးစားမှု မရှိတော့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အလုပ်တွေဆိုတာ ကိုယ့်အတွက် ဆော့ချင်တဲ့အချိန်မှ ထုတ်ဆော့တဲ့ ကလေးကစားစရာသာသာ ဖြစ်နေပြီလေ။
(၄) ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းတွေ ကျလာမယ်။
ဒါကတော့ ကုမ္ပဏီအတွက် ထိခိုက်မှု အကြီးကြီးပေါ့။ အရမ်းပျော်လွန်းလို့ အလုပ်တွေမှ မလုပ်ကြတာ။ အလုပ်ဘယ်ပြီးမလဲ? အလုပ်မပြီးတော့ ဘာမှမထုတ်နိုင်၊ မထုတ်နိုင်တော့ ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းတွေ ကျရင်း နောက်ဆုံး ကုမ္ပဏီက ဒေဝါလီခံလိုက်ရတော့မလိုလို 😛
(၅) ကိုယ့်အတွက် ဘာမှမတိုးတက်လာတော့ဘူး။
လူတစ်ယောက်က ဘဝမှာ ပိုကောင်းတဲ့နေရာ၊ အခြေအနေတစ်ခု ရောက်ချင်ရင် မနက်ဖြန်နဲ့ ဒီနေ့တောင်မတူဘဲ ပိုတိုးတက်လာတဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်နေရမယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီအလုပ်ကျတော့ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာလိုမျိုး နေချင်သလိုနေ၊ စားချင်သလိုစား၊ သွားချင်သလို သွားပြီး အရမ်းတွေ ပျော်နေတော့ တိုးတက်ဖို့ နေနေသာသာ ကိုယ့်ရဲ့ ရှိရင်းစွဲ ခန္ဓာကိုယ်ထက် နှစ်ဆလောက် မဝလာရင်တောင် တော်တော်ကို ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောရမှာ။ ဒီလို အပျော်တွေပဲ ပြည့်နှက်နေတဲ့ နေရာမှာ အလုပ်လုပ်ရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ညှာပြီး နွံထဲကို ဆွဲနှစ်နေတယ်ဆိုတာ သတိထားမိဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ကဲ… အဲဒီတော့ လုပ်ငန်းခွင်က ပျင်းစရာကောင်းလွန်းရင်လည်း လူတွေစိတ်ဓာတ်ကျလာတတ်သလို၊ အရမ်းပျော်နေရရင်လည်း အပေါ်ကလို ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ? ရှင်းပါတယ်။ နှစ်ဘက်ကို ညီညီမျှမျှ ထိန်းချုပ်တတ်ရင် ရပါပြီ။ အပျော်အပါးအတွက် အချိန်တချို့ပေးရမယ်ဆိုသလို၊ အလုပ်ချိန်မှာလည်း တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ကိုင်တွယ်တတ်ရင်တော့ ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေ ဖြစ်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူးနော်။
အပြျောတှမြေားလာတဲ့အခါ အပကျြဘကျရောကျသှားတတျတာ သဘာဝပါ
ကိုယျ့ရဲ့ စိတျအခွအေနေ အကောငျးအဆိုးပျေါ မူတညျပွီး ကိုယျ့အလုပျခှငျကို တိုကျရိုကျဖွဈစေ၊ သှယျဝိုကျ၍ဖွဈစေ ထိခိုကျတာမြိုးဖွဈစတေတျပါတယျတဲ့။ အရငျတုနျးကတော့ ကုမ်ပဏီတှမှော ကိုယျ့အလုပျပွီးရငျပွီးရော ဝနျထမျးက သသေကွေကွေေ ကိုယျနဲ့မဆိုငျဘူးဆိုတဲ့ ဘယျသူသသေေ ငတမောရငျပွီးရောဆိုတဲ့ စိတျဓာတျနဲ့ အထကျလူကွီးတှေ မြားခဲ့ပမေဲ့ အခုနောကျပိုငျးမှာတော့ ကိုယျ့ကုမ်ပဏီပိုပွီး တိုးတကျဖို့အတှကျ ဝနျထမျးတှရေဲ့ စိတျခမျြးသာမှုကို ဦးစားပေးပွီး စိတျဓာတျမွှငျ့တငျရေး လုပျငနျးတှကေို လုပျဆောငျလာကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တနျဆေးလှနျဘေး ဆိုတဲ့စကားအတိုငျး အပြျောတှပေဲ စှတျမြားလာတဲ့အခါ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးလေးတှေ ရှိလာတတျပါတယျ။
ဒါကတော့ ရှငျးပါတယျ။ လူဆိုတဲ့အမြိုးကိုက သာရာနောကျလိုကျတတျတဲ့ သဘောမို့ အပြျောတှပေဲ ဆကျတိုကျဆိုသလို လုပျနတေဲ့အခါ လုံးဝအလုပျလုပျခငျြစိတျ မရှိတော့တာမြိုးတှဖွေဈတတျပါတယျ။ (အခြိုစားနကြေ လူတဈယောကျကို အခါးရုတျတရကျ ကြှေးတဲ့အခါ ခါးခါးတူးတူးငွငျးသလိုမြိုးပေါ့။) ပငျြးသှားတာပေါ့လေ အလှယျပွောရရငျ…
(၂) အလုပျကို နရှေှ့ညေ့ရှေ့ လုပျလာတယျ။
ဒါကတော့ ပထမတဈခကျြရဲ့နောကျဆကျတှဲပေါ့။ အလုပျလုပျရမှာ ပငျြးလာတော့ ဒီနေ့ မလုပျလညျး ရပါတယျကှာ။ မနကျဖွနျမှ လုပျမယျ။ အဲဒီ မနကျဖွနျဆိုတဲ့ နရေ့ောကျလာတော့လညျး နောကျနမှေ့ လုပျမယျဆိုပွီး မပွီးဆုံးနိုငျတဲ့ မနကျဖွနျပေါငျးမြားစှားကို ရှရေ့ငျးရှရေ့ငျးနဲ့ လကုနျတဲ့အထိ ဘာအလုပျမှ မလုပျဖွဈတော့တဲ့ အကှကျဆနျးတှေ ဖွဈလာတာပေါ့။
(၃) အလုပျအပျေါမှာ လေးစားမှုမရှိတော့ဘူး။
ဒီလောကျ ပြျောစရာကောငျးတဲ့အလုပျကို ပွောငျးပါဆိုရငျတော့ ကုတျနဲ့ ကျောထုတျတောငျ ပွောငျးခငျြမှာ မဟုတျပမေဲ့ တကယျတမျး အလုပျအပျေါမှာ လေးစားမှု မရှိတော့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အလုပျတှဆေိုတာ ကိုယျ့အတှကျ ဆော့ခငျြတဲ့အခြိနျမှ ထုတျဆော့တဲ့ ကလေးကစားစရာသာသာ ဖွဈနပွေီလေ။
(၄) ထုတျလုပျမှုနှုနျးတှေ ကလြာမယျ။
ဒါကတော့ ကုမ်ပဏီအတှကျ ထိခိုကျမှု အကွီးကွီးပေါ့။ အရမျးပြျောလှနျးလို့ အလုပျတှမှေ မလုပျကွတာ။ အလုပျဘယျပွီးမလဲ? အလုပျမပွီးတော့ ဘာမှမထုတျနိုငျ၊ မထုတျနိုငျတော့ ထုတျလုပျမှုနှုနျးတှေ ကရြငျး နောကျဆုံး ကုမ်ပဏီက ဒဝေါလီခံလိုကျရတော့မလိုလို 😛
(၅) ကိုယျ့အတှကျ ဘာမှမတိုးတကျလာတော့ဘူး။
လူတဈယောကျက ဘဝမှာ ပိုကောငျးတဲ့နရော၊ အခွအေနတေဈခု ရောကျခငျြရငျ မနကျဖွနျနဲ့ ဒီနတေ့ောငျမတူဘဲ ပိုတိုးတကျလာတဲ့ လူတဈယောကျ ဖွဈနရေမယျတဲ့။ ဒါပမေဲ့ ဒီအလုပျကတြော့ ကိုယျ့အိမျကိုယျ့ယာလိုမြိုး နခေငျြသလိုနေ၊ စားခငျြသလိုစား၊ သှားခငျြသလို သှားပွီး အရမျးတှေ ပြျောနတေော့ တိုးတကျဖို့ နနေသောသာ ကိုယျ့ရဲ့ ရှိရငျးစှဲ ခန်ဓာကိုယျထကျ နှဈဆလောကျ မဝလာရငျတောငျ တျောတျောကို ကံကောငျးတယျလို့ ပွောရမှာ။ ဒီလို အပြျောတှပေဲ ပွညျ့နှကျနတေဲ့ နရောမှာ အလုပျလုပျရငျတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျညှာပွီး နှံထဲကို ဆှဲနှဈနတေယျဆိုတာ သတိထားမိဖို့ လိုပါလိမျ့မယျ။
ကဲ… အဲဒီတော့ လုပျငနျးခှငျက ပငျြးစရာကောငျးလှနျးရငျလညျး လူတှစေိတျဓာတျကလြာတတျသလို၊ အရမျးပြျောနရေရငျလညျး အပျေါကလို ဆိုးကြိုးတှေ ဖွဈတတျတယျဆိုတော့ ဘယျလိုလုပျကွမလဲ? ရှငျးပါတယျ။ နှဈဘကျကို ညီညီမြှမြှ ထိနျးခြုပျတတျရငျ ရပါပွီ။ အပြျောအပါးအတှကျ အခြိနျတခြို့ပေးရမယျဆိုသလို၊ အလုပျခြိနျမှာလညျး တငျးတငျးကွပျကွပျ ကိုငျတှယျတတျရငျတော့ ဒီလိုပွဿနာမြိုးတှေ ဖွဈမှာ မဟုတျတော့ပါဘူးနျော။
Tags: abilities, At, disadvantages, Fun, much, productivity, too, work
Hnin Ei Oo September 25, 2018